Ogaden News Agency (ONA) – Al-Shabaab oo Weerar Weeraray Saldhiga Ciidanka Soomaaliya ee Bariire.
Al-Shabaab oo Weerar Weeraray Saldhiga Ciidanka Soomaaliya ee Bariire.
Posted by ONA Admin	/ September 30, 2017
Koox ka tirsan maleeshiyada Al-Shabab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidmada Soomaaliya ku leeyihiin degaanka Bariire ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Maleeshiyada al-shabab ayaa weerarkan ku bilaabay laba baabuur oo ismiidaamin ah oo ay ku qarxiyeen mid ka mid ah dhowr albaab oo laga galo xeradaa oo ku taala duleedka galbeed ee Bariire. Dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo laba saac ku dhow ay socotay rasaasta culus ee qoryaha darandooriga u dhaca, hoobiyeyaal iyo gantaalada garbaha laga tuuro.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha, Ibrahim Aden Najah, ayaa u sheegay saxaafada in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen weerarkii 1aad, hase yeeshee maleeshiyada al-shabab ay ku soo qaadeen weerar labaad kaasoo dhaliyay dagaalka xooggan.
Gudoomiyaha ma uusan xaqiijin karin khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay, laakiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo lawaraystay ku waas oo magacooda qariyay ayaa sheegay in tira 10 askari ka badan laga dilay ciidamada dowladda, al-shababna ay ka dhinteen sideed qof. Wakaalada wararka ee Reuters ayaa tirada dhimashada askarta dowladda gaadhsiinaysa 15 askari.
Bariire ayaa u jirta magaalada Muqdisho 47 km dhinaca koonfur Galbeed waxaana ciidamada dowladda oo gacan ka helaya, la taliyeyaal Mareykan ah ay qabsadeen magaalada bishii August ee la so dhaafay xiligaas oo dad shacab ah lagu xasuuqay tuulada taasoo muran badan dhalisay.